जंगलस्काउट: उपकरण र प्रशिक्षण अमेजनमा सुरू गर्नुहोस् र तपाईंको बिक्री बढाउनुहोस् Martech Zone
मंगलवार, मार्च 16, 2021 मंगलवार, मार्च 16, 2021 Douglas Karr
रिटेल र ईकॉमर्समा अमेजनको प्रभावलाई कुनै अधोरेखित गर्ने छैन। महामारी र पछि साना खुद्रा विक्रेताहरूको बहुमत लक गर्ने निर्णय पछि रिटेल उद्योग मा भएको विनाश को उल्लेख गर्न को लागी।
आज 60० प्रतिशत भन्दा बढि उपभोक्ताहरूले अमेजनमा उनीहरूको अनलाइन शपिंग खोजीहरू सुरू गर्छन्। यसको बजार विक्रेताहरूबाट अमेजनको राजस्व अघिल्लो वर्षको तुलनामा २०२० मा 50० प्रतिशतले बढ्यो।
२०२१ ले अमेजन र यसका बिक्रेताको लागि ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ
म निर्भयताका एक हुँ अमेजन प्रधानमन्त्री शपर र मेरो घरमा केहि पनि डेलिभर हुने सुविधाको मजा लिनुहोस्। मसँग अमेजन कि पनि छ जहाँ ड्राइभरले प्याकेजहरू मेरो ग्यारेजमा सुरक्षित रूपमा छोड्दछ। मैले किनमेल गर्न रमाईलो गरी सकेको छैन त्यसैले मेरो सामानहरू मेरो घरमा पुर्‍याउनु राम्रो हो।
यदि तपाईं आजकल उत्पादनहरू बेच्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंको आफ्नै अनलाईन स्टोरमा पनि, अमेजनमा बेच्न पाउनु अत्यन्तै आवश्यक छ। त्यहाँ एक नकारात्मक पक्ष छ, अवश्य। तपाइँका उत्पादनहरू तपाइँका प्रतिस्पर्धीहरूसँगै प्रदर्शन हुने छ। तपाईंको प्रतिस्पर्धी कम महँगो हुन सक्छ वा राम्रो सम्झौता हुन सक्छ। र ... तपाईं अमेजनमा आस्थगित गरेर किनमेलको अनुभवको नियन्त्रण हराउनु भयो।
यो इमान्दारीपूर्वक धिक्कार छ यदि तपाईं गर्नुभयो भने, यदि तपाईंले गर्नुभएन भने निन्दा। व्यवसायको रूपमा, हामी सबैले हाम्रा उत्पादनहरू र सेवाहरूको लागि सम्भावित खरीददारहरू पूरा गर्न केही त्यागहरू गर्नुपर्दछ। यसमा कुनै श doubt्का छैन कि तपाई अमेजनमा तपाईको ब्यापारको बृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ र सजीलै तपाईको ब्यापार गर्न सक्नुहुन्छ।
अमेजनमा बिक्री शुरू गर्नुहोस्
कुनै पनि विशाल बजारको रूपमा, तपाईंको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको उपभोक्ता खोजी ढाँचाहरूको फाइदा लिनको लागि तपाइँको उत्पादनलाई अप्टिमाइज र विज्ञापन गर्ने अवसरहरू पहिचान गर्ने र अमेजन विज्ञापनमा प्रतिस्पर्धा तोड्न नहुनु हो। जंगलस्काउट तपाईंको बिक्री यात्रा सजिलो बनाउनको लागि निर्मित प्लेटफर्म हो। प्लेटफर्मले अमेजन विक्रेताहरूलाई सक्षम गर्दछ:
अनुसन्धान र बेच्नको लागि उच्च माग उत्पादहरू फेला पार्नुहोस्।
तपाईंको बनाउनुहोस् नाफा अमेजनमा बिक्री।
सबै प्रदान गर्नुहोस् प्रशिक्षण र समर्थन तिमीलाई बाटोको साथ चाहिन्छ।
जंगलस्काउट विक्रेताहरूको लागि विक्रेताहरू द्वारा निर्माण गरिएको थियो। तिनीहरूले विशेष ट्यूटोरियलहरू, चरण-देखि-चरण गाईडहरू, अनबोर्डिboard सत्रहरू, साप्ताहिक प्रशिक्षण, मास्टरमाइन्ड समूहहरू, र अधिक प्रदान गर्दछ।
संग जंगलस्काउटs अवसर खोजीकर्ता, तपाईं अमेजनमा अधिकतम मुनाफा सम्भावनाको साथ उत्पादनहरू फेला पार्न उच्च-माग, कम प्रतिस्पर्धा कीवर्डहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। तिनीहरूको प्लेटफर्मले तपाईंलाई एआई-चालित अन्तर्दृष्टि प्रयोग गरेर प्रचलनहरू र फिल्टर अवसरहरू पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ ताकि तपाईं विश्वस्त भई आफ्नो उत्पादन रणनीति बनाउन सक्नुहुनेछ।
जंगलस्काउटs उत्पाद ट्र्याकर तपाइँलाई उत्पादन विचारहरू बचत गर्न र अनुगमन गर्न मद्दत गर्दछ ताकि तपाइँले कहिले अवसरमा हराउनु हुँदैन। समय र स्पट प्रवृत्ति, अप्रत्याशित स्पाइकहरू, र alityतुमा अधिकमा बिक्रीको मूल्या a्कन गर्न कुनै उत्पादन वा उत्पादन समूहको ट्र्याक गर्नुहोस्।
तपाईं मूल्यांकन गर्न सक्नुहुन्छ उत्पादन क्षमता र सबै भन्दा विस्तृत उत्पाद अनुसन्धान फिल्टर, साथ साथै एक लाभ क्यालकुलेटरको साथ प्रत्येक खोजी अवसरको लागि मूल्य, राजस्व, र FBA शुल्क तुलना गर्न मद्दतको साथ तपाईंको खोजीलाई संकुचित गर्नुहोस्।
पूनरावलोकन कमाउनको अवसरलाई कहिल्यै नत्याग्नुहोस्। जंगल स्काउटको समीक्षा स्वचालन सुविधा पूर्ण विक्रेता केन्द्रीय समीक्षा अनुरोध प्रक्रियालाई स्वचालित रूपमा स्वचालित बनाउँदछ ताकि तपाईं आफ्नो व्यवसायमा पुनः समय लगानी गर्न सक्नुहुनेछ। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि प्रत्येक योग्य अर्डरले समीक्षा अनुरोध प्राप्त गर्दछ, अनुरोध स्थिति ट्र्याक गर्नुहोस्, र हेर्नुहोस् तपाईंले कति घण्टा बचत गर्नुभयो।
जंगलस्काउटको साथ सुरू गर्नुहोस्
अमेजन विज्ञापन पहिले अमेजन मार्केटिंग सर्विसेज (AMS) को रूपमा परिचित छ, छाता पद हो अमेजनका सबै विज्ञापन समाधानहरू वर्णन गर्न प्रयोग। यसलाई दुई भागहरूमा विभाजन गर्न सकिन्छ:
अन-अमेजन विज्ञापन - सेल्फ सर्विस अमेजन पीपीसी (प्रति क्लिक विज्ञापन भुक्तान गर्नुहोस्)
अन र अफ-अमेजन विज्ञापन - प्रबन्धित-सेवा अमेजन डीएसपी (CPM, वा लागत प्रति हजार छाप, विज्ञापन)
ठूला वा सानो एक विक्रेताको रूपमा, अमेजनले प्रस्ताव गर्ने विभिन्न विज्ञापन उपकरणहरू पूर्ण रूपमा बुझ्न यो महत्त्वपूर्ण छ - विशेष गरी प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाँदा। पूर्ण प्रस्तावहरू यहाँ बिक्रेताको लागि यस अद्भुत विज्ञापन गाईडमा सूचीबद्ध छन् जंगलस्काउट.
अमेजन विज्ञापन गाइड
अमेजन (FBA) द्वारा पूर्ति
जबकि अमेजनले तपाइँका उत्पादनहरू आफैंलाई पूरा गर्ने माध्यम प्रदान गर्दछ, तपाइँ अमेजनको पूर्ति कार्यक्रम, एफबीएको पनि फाइदा लिन सक्नुहुन्छ, ताकि तपाइँ उत्पादन, प्याकेजि experience अनुभव, र तपाइँको मार्केटिंग प्रयासमा ध्यान दिन सक्नुहुन्छ। केवल उत्पादन वा निर्मित उत्पादन प्राप्त गर्न भारी लगानी गरेका व्यवसायहरूका लागि, एफबीए एउटा उत्तम विकल्प हो किनभने तपाईं सिधा अमेजनमा पठाउन सक्नुहुन्छ र बाँकीको हेरचाह गर्नुहुन्छ।
अमेजन विश्वमा सब भन्दा उन्नत पूर्ति नेटवर्क हो। FBA ले तपाइँको व्यवसायलाई अमेजन पूर्ति केन्द्रहरु मा तपाइँको उत्पादनहरु को भण्डार गर्न सक्षम गर्दछ, र त्यसपछि अमेजन प्याक, जहाजहरु, र तपाइँको उत्पादनहरु लाई ग्राहक सेवा प्रदान गर्दछ
FB सेट अप गर्नुहोस्A - तपाईंको सिर्जना गर्नुहोस् अमेजन बिक्री खाता, र विक्रेता केन्द्रीय मा लगईन एफबीए सेट अप गर्नुहोस्.
तपाईंको उत्पाद सूची बनाउनुहोस् - एक पटक तपाईं तपाइँका उत्पादनहरू थप्नुहोस् अमेजन क्याटलगमा, एफबीए सूची निर्दिष्ट गर्नुहोस्.
तपाइँका उत्पादनहरू तयार गर्नुहोस् - को अनुसार एक पूर्ति केन्द्र मा सुरक्षित र सुरक्षित यातायात को लागी तपाईंको उत्पादनहरु लाई तयार गर्नुहोस् अमेजन प्याकिंग दिशानिर्देशहरू र शिपिंग र मार्ग आवश्यकताहरू.
अमेजनमा तपाइँका उत्पादनहरू पठाउनुहोस् - तपाईंको शिपिंग योजना सिर्जना गर्नुहोस्, अमेजन ढुवानी आईडी लेबलहरू प्रिन्ट गर्नुहोस्, र तपाईंको लदान अमेजन पूर्ति केन्द्रहरूमा पठाउनुहोस्। को बारे मा अधिक जान्नुहोस् अमेजनमा सूची पठाउँदै.
टैग: अमेजनअमेजन एफबीएअमेजन उत्पादन रैंकिंगअमेजन उत्पादन ट्र्याकिंगअमेजन बिक्री प्रशिक्षणजंगलस्काउटउत्पाद अनुसन्धान उपकरणहरूअमेजनमा बिक्री
AppSheet: निर्माण र Google Sheets को साथ सामग्री अनुमोदन मोबाइल अनुप्रयोग डिप्लोय गर्नुहोस्